Cashar Naxariis Leh | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Cashar Ku Naxariista
Meey 20 , 2021
Naxariistu waxay ku faafaysaa bulshada dhexdeeda iyadoo ay ugu wacan tahay dadaalka koox ardayda fasalka koowaad iyo saddexaad ah. Ardayda fasalka koowaad ee dugsiga hoose ee Andersen, oo ay weheliyaan koox ka mid ah ardayda barta internetka ee fasalka saddexaad oo ka kala socda Andersen, Afton-Lakeland iyo Lake Elmo, ayaa loo xilsaaray inay soo saaraan qorshe suuqgeyn ah oo loogu talagalay "naxariis."
Waxay isku magacaabeen Caruurta Naxariista waxayna ku bilaabeen cilmi baarista kaaliyeyaasha bulshada ee ku xeel dheer naxariista, oo ay ku jiraan saraakiisha booliska deegaanka iyo dab-damiska, maamulaha iskuulka, shaqaalaha ka shaqeeya dugsiga sare ee Croixwood, iyo maktabad maktabada Bayport. Waxay sidoo kale wareysteen ardayda kale ee dugsiga iyagoo bartilmaameed u ah dhagaystayaashooda, sidaa darteed waxay abuuri karaan olole naxariis leh oo iyaga la dhacsan.
Xitaa waxay diyaariyeen bayaanka howlgalka: "Waxaan rumeysanahay in naxariista loo suuq geeyo si kasta oo macquul ah si dadka looga caawiyo inay dareemaan wanaag, farxad iyo in adduunka laga dhigo mid ka wanaagsan."
Kooxo ahaan, ardaydu waxay abuureen xayeysiis si kor loogu qaado naxariista iyadoo lagu saleynayo dhammaan wixii ay ka barteen kaaliyeyaasha bulshada. Laga soo bilaabo farshaxanka illaa heesaha, ardaydu waxay muujiyeen qaabab dadku ugu naxariisan karaan midba midka kale - laga bilaabo ka caawinta qoolleydu si ammaan ah inay uga gudbaan waddada illaa ixtiraamka saraakiisha bilayska. Kadib waxay u soo bandhigeen ololahooda xayeysiinta guddi khubaro ah oo suuq geyn ah iyada oo loo marayo Zoom si ay uga helaan jawaab celin.
“Qaabka ugu sareeya ee waxbarashadu waa marka qalbiga laga wadaago,” ayay tiri macallinka fasalka koowaad Jill Kostynick. "Ardaydayadu way ka sarreeyeen wixii aan ka filaynay markii ay ku xayeysiinayeen wanaagga ka dhex jira bulshadeenna oo ay la socdaan fekerka cajiibka ah iyo hal-abuurka."
Mashruuca waxaa lagu maalgeliyey deeq fasal oo ka timid Qorshaha Iskaashiga .
Ardayga SAHS ayaa loo magacaabay finalka gobolka ee Tiyaatarka Farsamada Heerka
Zachary Benson oo ka tirsan Dugsiga Sare ee Stillwater Area High School ayaa loo magacaabay Finalist ka Tiyaatarka Farsamada Heerka Hennepin Theater Trust. Benson wuxuu ka mid ahaa shan arday oo kaliya oo gobolkaa loogu aqoonsaday abaalmarinta.
Ana Weaver ayaa ku guuleysatay horyaal gobol 3200 mitir tartan
Weaver wuxuu dhigay rikoor shaqsiyeed iyo iskuul cusub oo soconaya 10:15:27, taas oo ka badneyd lix ilbiriqsi ka sareysa qofka kaalinta labaad galay.
Heerarka qalin-jabinta ee Stillwater weli way xoogan yihiin
Xitaa inta lagu jiro aafada, ardaydayadu way qalinjabin! Dugsiga Sare ee 'Waterwater Area High School' wuxuu lahaa heerka qalin-jabinta ee 96.61% sannadka 2020 - illaa sanadkii ka horreeyay oo ahaa 95.8%.
Barashada xagaaga waxay noqon kartaa mid xiiso leh!
Websaytka Clever.com wuxuu soo bandhigayaa ilo fara badan oo kala duwan si ilmahaaga loogu mashquuliyo iyadoo la sii wado dhismaha xirfadahooda waxbarasho.
Barnaamijka Jidadka ayaa ka caawinaya ardayga inuu hamigiisa u beddelo xirfad ku habboon
Ka dib qaadashada qiimeynta barnaamijka Stillwater Pathways, ardaygu wuxuu ku faraxsan yahay mustaqbalkiisa mustaqbalka.
Kooxaha biyaha weli ku jira ayaa kaalinta 2-aad ka gala tartan waara oo caalami ah
Ardayda Dugsiga Sare ee Stillwater ee kala ah Claire Abbott iyo Addie Foote waxay ku guuleysteen kaalinta 2-aad ee Mashruuca Green Green Challenge, oo ah tartan waara oo caalami ah.
Ardayda Bridge Transition waxay xaaqaan tartanka Minnesota SkillsUSA
Ardayda ku-meelgaarka ah ee Bridge Transition waxay ku soo bandhigeen wacdaro shirkii SkillsUSA Minnesota Championships and Leadership Conference.
Ciyaartoyda ugu sarreysa ee ugu sarreysa ayaa la guddoonsiiyay Abaalmarinada Buugga Kulliyadda
Toddoba arday oo ka tirsan Fasalka 2022 ayaa lagu sharfay Dugsiga Sare ee Stillwater Area oo loogu talagalay guulaha waxbarashadooda iyo kaqeybgalka bulshada.
Saacadaha Xafiiska: 8:00 am - 4:30 pm